Ka Helida Qolada Gurigu Inay Hagaajiso Wixii Halaysan | LawHelp Minnesota
Ka Helida Qolada Gurigu Inay Hagaajiso Wixii Halaysan
Kiraystahu waxa uu xaq u leeyahay inuu ku noolaado guri intii macquul ah hagaagsan, oo ku haboon in loo isticmaalo deegaan ahaan, oo ka soo baxa shuruudaha sharciyada guryaha ee deegaanka si macquul ahna tamartiisu u tafa-tiran tahay. Qolada guriga waxaa waajib ka saaran yahay in gurigu noqdo meel lagu noolaan karo. Hadii qolada guriga aad uga jirtaa aysan hagaajin guriga wixii ka halaaba, waxaa jira waxyaabo aad sameyn karo si aad ugu khasabto in qoladu guriga hagaajiso. Hadii aysan jirin xaalad degdeg ah, samee waxyaabaha hoos ku xusan.
Hadii xaalad degdeg ahi jirto, wac xafiiska (legal aid markiiba). Xaaladaha degdeg ahi waa kuwa sida kooronto la’aan, kulayl la’aan, madbakha la’aan, tuubo jabid, biyo kulul la’aan, ogaysiiska ah in guriga la duminayo.
Samee Liis ay ku qoran yihiin waxa u baahan in la hagaajiyo
Samee liis ama buuxi liiska hagaajinta ee halkan ku lifaaqan ka dibna u dir qolada guriga. Kala har nuqul (copy). Waxaa ugu fiican inaad u dirto liiskan oo kale ah ama warqad. Ugu hagaaji ciwaanka aad kirada ka bixiso. Qaar ka mid ah xaakimadu dhib uma arkaan dhambaalada (text) iyo emaylada lagu codsanayo hagaajinta. Hadii aad dirto dhambaal ama emayl, hubi inaad daabici karto iyagoo leh shaabada taariikhda iyo waqtiga ah. Qolada guriga aad uga jirtaa waxa ay haysataa 14-cisho oo ay ku hagaajiso waxa halaysan, ka dib kolka ay codsiga qoraalka ah adiga kaa helaan.
Wac Guri Fatashe
Khasab ma aha inaad wacato fatashe laakiin hadii magaaladaadu ay leedahay fatashayaal, waco. Waxa ay soo xaqiijin karaan waxa aad ku qortay liiska. Kolka ay yimaadaan, tus, liiskaaga si kolkaa aysan waxba u gafin. Waysii inay nuqul (copy) kaa siiyaan warbixintooda.
Minneapolis, ka wac 3-1-1. St. Paul, ka wac (651) 266-8989. Qaybaha kale ee gobolka waxa aad ka wici kartaa 2-1-1, ama 1- (800) 543-7709 si aad u ogaato in magaaladadu leedahay guryo fatashe.
Guryo fatashayaashu waxaa dhici karta inay helaan wax halaysnaa oo aad adigu gaftay. Hadii dhibaatooyinku ay aad u xun yihiin, waa ay dumin karaan guriga hadii aan la hagaajin. Hadii dhibaatooyinku aysan ahayn wax u baahan in degdeg wax looga qabto, fatashayaashu badanaa waxa ay siiyaan qolada guryaha 30-cisho oo ay ku hagaajiyaan waxa halaysan.
Qolada guriga aan uga jiraa guriga ma iiga saari karaan wicida fatashaha?
Qolada gurigu kaagama saari karaan guriga waydiinta hagaajinta guriga ama wicida guri fatashaha. Laakiin, qolada gurigu waa isku dayi karaan inay guriga kaa saaraan hadii aad u bixin waydo kirada waxa u baahan in la hagaajiyo awood. Hadii aad la harto qayb kiradaada ka mid ah, ayna qolada gurigu isku daydo inay guriga kaa saarto waayo waxa aad codsatay in guriga lagaa hagaajiyo, waxa aad ka codsan kartaa maxkamadu inay diido guri ka saarida lagaana “tir-tiro”, taa oo macnaheedu yahay in laga tirtiro diiwaanada dadweynaha. Eeg warqadayda xaqaa’iqa ee guri saarida Guri ka Saarida.
Ka waran hadii qolada gurigu aysan hagaajin guriga waxa ka halaysan?
Hadii qolada gurigu aysan hagaajin waxa halaysan ka dib kolka aad warqada qortay ama aad wacday fatashada guryaha, xareyso dacwo Kiro Rahmid ah. Tan macnaheedu waa waxa aad kirada u dhiibaysaa maxkamad si aad u bilwdo kiis ka dhan ah qolada guriga. Kiiska ujeedadiisu waa in maxkamadu amarto qolada guriga inay sameeyaan hagaajinta. Waxaad kalood u isticmaali kartaa kiiska inaad ku khasabto qolada guriga inay u hogaansamaan waxyaabaha heshiiska liiskaaga ku qoran hadii lagu xad-gudbay. Waxa aad xareysan kartaa mid hadii:
Ay 14-cisho ka soo wareegtay intii aad u dirtay qolada guriga warqada ku saabsan hagaajinta iyo/ama waxyaabaha kale ee xad-gudubka ku ah heshiiska liiska ee ay qolada gurigu sameysay ama
Waqtii kama dambaysta ahaa ee uu siiyey fatashaha gurigu waa la dhaafay ama fatashaha gurigu waxa uu siiyey qolada guriga waqti xad-dhaaf ah oo ku hagaajiyaan wixii halaysan.
Hadii aad tahay qof dan yar ah, wac xafiiskaaga gargaarka dhanka sharciyada ee (legal aid). Waxa aad ka heli kartaa kaaga: www.lawhelpmn.org/so/providers-and-clinics. waxa ay kaa noqon karaan wakiil, ama waxa ay kuu gudbin karaan hay’ad kale ama waxa ay ku siin karaan talo. Hadii aadan heli karin qareen, adiga laftaadu kaligaa waa aad geli kartaa hawsha.
Inta aad ka xareynayso dacwada Kiro Rahmida ah, sii kirada qolada guriga kolka la gaaro waqtigeeda. Hadii aadan bixin, qolada gurigu waxa ay xareysan kartaa dacwo guri ka saarid ah oo adiga kaa dhan ah. Waxaa laga yaabaa inaad haysato wax aad isku difaacdo sababta oo ah dhibaatada dhanka hagaajinta la’aanta ka jirta, laakiin waxaa wacan amaana ah inaad isticmaasho dacwada Kiro Rahmida intii aad iska difaaci lahayd dacwo guri ka saarid ah.
Ma Kharash baa iiga baxaya xareysiga Dacwada Kiro Rahmida?
Waxaa jira khidmad lagu xareysto dacwadaha caynkan ah. Hadii aad tahay qof dan yar ah, buuxi foomka ka saamixida khidmada (IFP) ee maxkamada si aad uga codsato maxkamadu inay kaa dhaafto khidmadahaa. Maxkamadu iyada ayaa haysa foomamkaa ama waxa aad ka heli kartaa ka sameynsan kartaa khadka (create one online) (ingiriisi kaliya) adigoo isticmaalaya wareysiga talaabo-talaabada ah.
Gal: http://www.lawhelpmn.org/forms (ingiriisi kaliya). Riix Saamixida Khidmada Maxkamada [Click on Court Fee Waiver (IFP)] (ingiriisi kaliya).
Kolka aad xareysato foomkan (IFP) ga hubi inaad haysato cadeyn ah inaad dan yar tahay, sida jeeg dabadood, ama cadeyn ah inaad dowlada gargaar ka hesho.
Sidee ayaan u xaxareystaa Dacwo Kiro Rahmid ah?
Si aad u xareysato dacwo Kiro Rahmid ah, tag maxkamada degmadda. Siina qaado:
Warqada Dhaarta Kiro Rahmida ah (foom ku lifaaqan)
Nuqulka (copy) codsiga qoraalka ah ee hagaajinta aad ku codsanaysay ee aad u gudbisay qolada guriga ama amarada fatashaada ah ee sameeyey fatashada magaaladu iyo
Dhamaan kirada la iska rabo (cadaan ama jeega sugan). Uma baahnid inaad sugto ilaa iyo waqtiga kirada la gaarayo si aad u xareysato dacwo Kiro Rahmid ah. Laakiin waa khasab inaad u dhiibto dhamaan kirada oo dhan maxkamada kolka la iska rabo.
Tusaale ahaan: waxa aad xareysan kartaa dacwada Kiro Rahmid ah, ka dib kolka aad siiso kirada bisha qolada guriga. Si kolkaa aysan khasab kuugu noqon inaad u dhiibto maxkamada kirada. Laakiin hadii wax kiro ah lagu leeyahay kolka aad xareysanayso dacwada Kiro Haynta ah, waxaad u baahan tahay inaad u dhiibto maxkamada kirada lagugu leeyahay wali kolka aad xareysanayso kiiska.
Hadii aadan u wada dhiibin dhamaan kirada aan la bixin maxkamada kolka aad xareysanayso Kiro Rahmida ah, qolada gurigu waxay ka codsan kartaa xaakinka in guriga lagaa saaro.
Karaanigu waxa uu kuugu qaban adiga balan dacwo qaadid ah 10-14 cisho gudahood laga bilaabo kolka aad xareysato dacwada Kiro Rahmida ah.
Maxaan ugu baahnahay dacwada dhageysigeeda awgeed?
Soo aruuri cadeymo. Ka dibna keen maxkamada. Cadeymahu waxa ay noqon karaan sida:
Sawirada muujinaya dhibka. daabad, u calaamadi taariikhdana ugu qor maxkamada.
Hadii fatashe guriga yimid, tag xafiiska fatashaadaha kana soo qaado nuqul (copy) sugan oo ah Warbixinta Fatashaada. Hadii fatashahu uu og yahay axwaal ka badan waxa ku qoran warbixinta, waxa aad ku “khasbi” kartaa inuu maxkamada yimaado. Waydii karaaniga maxkamada sida arrintan loo sameeyo.
Daabac emaylada, fariimaha qoran (text), iyo waxyaabaha kale ee muujinaya in aad waydiisatay qolada guriga inay guriga ka hagaajiyaan waxa ka halaysan.
Makhraatiyaasha kale, sida dariska, arkay guriga waxa ka halaysan.
Mid kasta oo ka mid ah waxyaabaha halaysan, waxa aad u baahan tahay inaad maxkamada u cadeeyso:
Inta dhibkaasi jiray
Mudadda ay qolada gurigu ogayd in dhibkaasi jiro.
Sida uu dhibku u saameeyey adiga iyo sida uu uga dhigay noloshaada wax xun. Faah-faahino ka bixi!
Waxa aad waydiisan kartaa maxkamada:
Inay amartu in la hagaajiyo wixii halaysan
Ay yareyso kirada ilaa iyo inta hagaajinta la sameynayo.
Lagu soo celiyo lacagtii kirada bilaha guriga aad ku noolayn isagoo hagaajino u baahan.
Inay kuu ogolaato inaad adigu hagaajiyo guriga aadna ka jarato kharashka kirada.
Kani waa tusaale arrintaa ah
Hadda waa Juun. Waxaa aad guriga soo degtay Janaayo 1. Tuubooyinka biyahu waa ay xumaayeen kolkii aad guriga soo degtay. Waxa aad qoraal ahaan ugu sheegtay qolada guriga tuubooyinka xun markiiba. Saqafkuna biyo ayuu soo daynayey ilaa iyo bishii Maarso, waxa aadna qolada guriga qoraal ahaan ugu sheegtay kolkii uu bilaabay saqafku biyo sii deynta.
Hadii aadan wali bixin kirada bisha Juun, waxa aad bilaabi kartaa kiis Kirada Rahmid ah adigoo kirada bisha Juun ee aan la bixin u dhiibaya maxkamada ayadoo ay ku lifaaqan tahay foomka dhaarta ee Kiro Rahmida iyo nuqul (copy) warqadihii aad u qortay qolada guriga Janaayo iyo Maarso. Waxa aad ka codsan kartaa xaakimka inuu amro in qolada gurigu wax ka qabato dhibaatooyinka. Waxaa kalood codsan kartaa in lacagta kirada ee bilaha Janaayo iyo Febraayo qaar la dhimo waayo tuubooyinka xun awgood iyo in cadad ka badan intii hore laga jaro kirada Maarso, Abriil, Maajo iyo Juun, sababtoo ah dhibka labaad ee saqafka biyaha sii deynaya.
Sidaa awgeed, lacagta aad u dhiibtay maxkamada, qaar ka mid ah waa inay kuu soo noqoto sababta oo ah in aan guriga lagaa hagaajin. Waydii xaakimka inuu dhimo kirada aad mustaqbalka bixinayso ilaa iyo inta qolada guriga ay ka hagaajinayso waxa guriga ka halaysan.
Waa Muhiim in la ogaado in xaakimku uu leeyahay awood badan oo uu ku go’aansado inta ay le’eg tahay kiro dhimida aad helaysaa. Xaakimyada kala duwani waxa ay siiyaan qiimeyno kala duwan arrimaha hagaajinta, kolkaa, cadadka dhimida kirada ahi aad ayey u kala duwanaan karaan iyadoo hadba ku xiran cida go’aansanaysa kiiskaaga ama meesha aad ku nooshahay.
Xasuusnow: dulucda weyn ee kiiska kirada rahmida ah waa in guriga laga hagaajiyo waxa ka halaysan ee ma aha in kirada la soo celiyo. Taasi waa sababta ay muhiimka u tahay in aad adigu cadeyso sida dhib walbaa uu kuu saameeyey adiga uuna noloshaada uga daray intii aad ku noolayd guriga kirada ah. Cadeynta sida dhib walbaa uu uga daray noloshaada waxa ay caawin kartaa inay ka dhaadhiciso xaakimka inuu xukumo kiro yareyn iyo amrid hagaajin guriga ah.
If this is the case, you may be able file an Emergency Tenant Remedies Act (ETRA) case against your landlord. In the ETRA case, ask the judge to say that the lease is ended. It’s best if you have a lawyer to help you with a case like that. See our fact sheet Dhibaatooyinka Dayactirka ee Degdegga Ah.
Ma jiraan wax kale oo aan sameyn karaa?
Hadii aadan xareysan kiis Kiro Rahmid ah, waxa aad ka dacawoon kartaa Maxkamada Dhexdhexaadinta (Conciliation Court). Arritan waa aad sameyn kartaa inta aad wali guriga ku nooshahay ama marka aad ka guurto.
Maxkamada Dhexdhexaadintu (Conciliation Court), kama codsan kartid in guriga la hagaajiyo – kaliya lacagta khasaaraha uun. Uma baahnid qareen. Si aad u cadeyso kiiskaaga, waa ay ku caawin hadii aad haysato waxyaabo sida warqado, warbixinada fatashaadaha, sawiro daabcan. Eeg warqadayada xaqaa’’iqa ee, Maxkamadaha Dacwadaha Madaniga.